Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguIara
Indlu izinze eBribes, eCambre. Iikhilomitha ezili-18 ukusuka e-A Coruña kunye ne-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. Ngesikhululo sebhasi kunye neendawo zokutyela.
Inamagumbi okulala ayi-7, amagumbi okuhlambela ayi-3, igumbi lokuhlala leemitha ezili-125 ezineebhedi zesofa ezi-6, i-barbecue, igadi enemithi yeziqhamo, i-hammock, indawo yokuphola kunye nokupaka iibhasi kunye neemoto. Ihlaziywe ngokupheleleyo, inezifudumezi, iWi-Fi, iscreen esisicaba, indawo yokuqubha ezizikwemitha ezintlanu, iindawo zokuhlala elangeni, iitafile zangaphandle kunye nenethi yebhola yevoli. Umthamo 30 abantu.
Indlu ekuphela kwayo eGalicia enamagumbi okulala ayi-7, amagumbi okuhlambela ayi-3, igalari yeemitha ezingama-250 kunye nehektare enye yefama enechibi (ehlotyeni) kunye nomnatha webhola yevoli.
IMIGAQO YEZINDLU YOMOSTERIRO
▪ Abaxumi bafumana iziko likwimeko egqibeleleyo, izibonelelo zicocekile kwaye zonke izinto zisebenza ngokuchanekileyo. Le migaqo yokusetyenziswa yamkelwe xa usayina IFOMU YOKUBHALISA.
▪ Izitya kunye nezinto zasekhitshini mazishiywe zicocekile kwaye zibekwe ngendlela efanelekileyo kwindawo ehambelanayo. Kwaye inkunkuma iqokelelwe.
▪ IZIXHOBO IYA KUGCINWA ZISEBENZA NGOKUGQIBELELEYO, ISIHLOKO NGASINYE KWINDAWO YASO YASO. Xa kwenzeka nawuphi na umonakalo ngenxa yokusetyenziswa kakubi, LE NTO IYA KUXHUTYELWA KUBANI BENDLU kwaye iya kuhlawulwa ngabathengi.
▪ Abaxhasi banoxanduva lokugcina indlu ivaliwe ngokufanelekileyo xa bengekho.
▪ Xa kuthe ukuba Abathengi azise inja / ikati, ukuba banoxanduva yokukhwela yezilwanyana ifanitshala, dirtying endlwini ilindle okanye umchamo ukwenza nawuphi na umonakalo izibonelelo, kuya kufuneka ahlawule iindleko xa ku isiganeko sawo nawuphi na umonakalo. Abaxhasi baya kuba ngabo kuphela abanoxanduva loxanduva loluntu olunokubakho oluvela kwiintshukumo zamaqela esithathu kwisilwanyana sabo sasekhaya.
▪ Abanini baya kuligcina ilungelo lokuphonononga, phambi kokuba bahambe abaxumi kwindawo yokuhlala. Kuya kuthatha phakathi kweentsuku ezi-5 / 1 iveki ukujonga indlu kunye nokubuyisela idiphozithi. Ukubuyisela ingqibelelo yediphozithi kuyimfuneko ukuba abaxhasi abazange baphule nayiphi na into; Abazange basuse nantoni na kwindawo, zonke izitya kufuneka zihlanjwe kwaye inkunkuma iqokelelwe. Kwimeko yokuphulwa kwayo nayiphi na into, kufuneka yaziswe ngexesha lokuhlala kwaye kwimeko yokuvala igumbi lokuhlambela, kufuneka lixelelwe. Ukuba naziphi na iitawuli, iibhedi, iisofa okanye izakhiwo zangaphandle zendlu inotywala, igabho okanye iintsalela zeebhuthi zecuba okanye iibhotile eziqhekekileyo, IDIPOSITHI AYI KUBUYISWA.
 Indawo yokulala iya kuhlalwa kuphela kwaye ngokukodwa ngenani labantu elichazwe kwifomu yobhaliso, abantu abazazisi zabo zibhaliswe emnyango wendlu.
▪ Abathengi kufuneka bazalise iifom zobhaliso zalowo ucelwe ngumnini.
▪ Abathengi baya kubambelela kwiishedyuli ezimiselweyo zomsebenzi kunye nokulahlwa kwendlu, bebonisana ngayo nayiphi na imeko nabanini malunga nemida yeyure.
4.08 out of 5 stars from 26 reviews
4.08 · Izimvo eziyi-26
Ngexesha lobhubhane amaqela kunye nemisitho ayivumelekanga. Ecaleni kwendawo yokuhlala kukho umntu olungisa iinwele, umgama ozimitha ezingama-50 kukho ibala lebhola yomnyazi elineenjongo zebhola ekhatywayo. Kukho iindawo zokutyela ezifana neBecerra kunye neCasa Pena kumgama weemitha ezimbalwa apho unoku-odola ukutya okutyayo kwaye utye kakuhle kakhulu. I-Cambre idume nge-Cecebre reservoir, ehlala imizuzu emi-5 kude, iindledlana kunye neendlela zokuhamba ngehashe (sinokulawula imisebenzi) kunye nokuba yindawo apho kubhalwe inoveli edumileyo yaseGalician O Bosque Encantado.
Umbuki zindwendwe ngu- Iara
Ukungena okuzenzekelayo iiyure ezingama-24. Ingqalelo ekhawulezileyo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Coruňa